HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
RAHA mahita an’i Tafita * ianao, dia olona sariaka sy marani-tsaina ary tia namana no hitanao. Toa miramirana erỳ izy rehefa jerena etỳ ivelany, nefa ao anatiny ao tena mamoy fo. Mahatsiaro tena ho tsy misy dikany foana izy. Hoy izy: “Mieritreritra foana aho isan’andro hoe tiako aho raha maty. Mino aho fa ho tsara kokoa ny fiainana raha tsy misy an’ahy.”
“Raha olona 1 no maty namono tena, dia efa nisy 200 [hafa] nanandrana nanao izany, ary 400 nieritreritra an’ilay izy.”—NY GAZETY (ANGLISY), KANADA.
I Tafita aloha efa nilaza fa tsy hamono tena izany mihitsy. Na izany aza anefa, dia mihevitra izy fa tsy misy antony tokony hahavelona azy intsony. Hoy izy: “Tiako izao raha tratran’ny loza tampoka aho, dia maty. Amiko tsy ratsy izany hoe maty izany, fa tsara aza.”
Maro no mahatsapa hoatran’i Tafita. Misy aza efa nieritreritra na nanandrana namono tena mihitsy. Misy zavatra hitan’ny mpikaroka anefa momba an’ireny olona ireny: Ny fijaliany no tiany hifarana, fa tsy ny fiainany. Mihevitra izy fa mendrika ny ho faty. Mba mila omena toky àry izy hoe mbola mendrika ny ho velona.
Mamoy fo ve ianao, ka tsy te ho velona intsony? Ireto misy antony telo mbola tokony hiainanao.
HEVI-DISO: Tsy azo resahina na tononina akory ny hoe mamono tena, satria mampirisika ny olona hanao izany.
NY MARINA: Mety hiova hevitra ny olona te hamono tena, raha resahina aminy mivantana izany.
Na tsy azonao ovana aza ny fiainanao, dia mbola misy azonao atao.